Ụbọchị My Pet » Nwere ike Food Mee ọ bụla Mmụta Mmekọrịta Mma?
Weghachi azụ ọha akwụkwọ sayensị klas, mgbe ị mụtara bụ isi dị mkpa na ndụ.
Anyị isi e jupụta na ihe ọmụma banyere otú anyị si dị ka mmadụ na-achọ mgbe nile ọkọnọ nke ikuku, mmiri na nri na-adị ndụ. Chọpụta, ikuku na mmiri dị mkpa, ma ka ọtụtụ ndị na m ụdị onye dị mkpa a chọrọ na n'ezie guzo apụ na- nri. Ọ pụrụ ịbụ na m ihe 18 afọ nwoke mgbe ụfọdụ na-eche na nke ya isi ahuhu ka iri nri, ma na-amụrụ n'ógbè nri esetịpụ nnukwu ike.
Food-eme ka anyị ọgaranya mmezu ma ego mebiri, nri na-eweta enyi ọnụ, nri bụ na-akpata kwa ụbọchị ememe na nwere ike ime ka ihe ọ bụla na-amụrụ mmekọrịta mma.
Ka m kọwaa ihe ...
M a ma ama ọkọ akụkọ ihe mere kama m na mara mma n'aka na kemgbe mmalite nke oge, mmekọrịta a kpaliri na-mụbara n'ihi nri.
Cavemen na cavewomen bonded n'elu mma ọnwa-udo dinners nke ṅara n'ọkụ osa na mkpụrụ. The Viking oge mejupụtara nke àgwà oge n'etiti ndị hụrụ na-akọrọ n'oge hearty n'oriri. Taa, ọbụna na-aga maka a kọfị ụbọchị ga-eleghị anya na-agụnye ụfọdụ ụdị nri. Ị na-ebe.
Na-amụrụ n'ógbè, nri ka na-esetịpụ a ọnọdụ nke ike a ma ama na mmekọahụ.
Pizza nwere ike na-anọchi anya ndị kasị vasatail na-akwanyere ùgwù mmekọrịta kere niile oge. O siri ike ịhụ mgbe a ga a girl ekwu enweghị ka a mara mma Pizza ụbọchị (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ na a nicer fella). Simple mmegharị ka iwu ma ọ bụ na-aga n'ihi na a mma stroll ogbe ndịda na Pizza ebe ga-eme ka ọ bụla mmekọrịta ọma.
Ihe niile dị ka nke ukwuu mfe na nri.
Ma ọ bụ gị na mbụ ụbọchị ma ọ bụ iri na abụọ na ụbọchị, ma ọ bụrụ na ọ gụnyere nri na gị na onye gị na ma na-enweta mgbe ahụ mkparịta ụka ga-asọpụta mma, ọnụ ọchị ga-chawapụrụ, gị bellies ọzọ jupụtara obi ụtọ na ndị ọzọ yiri njikọ gị ga-adịrị.
Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ ụlọ a na-arụ ọrụ na stovu, oven, tosta, ngwa ndakwa nri ma ọ bụ kpo oku oriọna ị nwekwara ike na-ekere òkè ná mmekọrịta a ike. Site nri nri ọnụ, ma ọ bụ na-ewere ibe kwadebe a mma mgbasa gị ịrịba ama ndị ọzọ ga-a fun na-eme gị nso ọnụ (ọbụna ma ọ bụrụ gị nri nkà na-esote onye ọ bụla ... KD bụ ka nri).
Nke a na-eweta anyị obibi ndụ. E nwere ihe a mara mma ihe na ụmụ akwụkwọ nile bụ ndị nwere nri atụmatụ ga-aghọta. Na a dị mfe rektangulu nke plastic, onye pụrụ inwe nnukwu ichekwa nri maka ihe na-ele ka a dị nnọọ nta efu. Swipe, eri, na ọ bụrụ na ọ nwere ike mfe abuana a ihunanya akụkụ. Ọtụtụ nri atụmatụ pụrụ ọbụna a ga-eji nile campus na ụfọdụ ogbe ndịda ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nke a na-emepụta ihe mfe nnweta oriri na ya mere a ụzọ dị mfe iji kwụọ ụgwọ maka na-aga na ụbọchị.
Na ụwa nke elu-akụziri, nri nwere ike ime ka ihe ọ bụla na-amụrụ mmekọrịta mfe, mma, na dị nnọọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị egwu. Ha na-ekwu ịhụnanya na-adịghị mkpa a mere ... ma ọ n'aka kwesịrị nri.